Archive du 16-juil-2021
Vola hanampian’ny IDA ho an’i Afrika Nangataka i Rajoelina mba ho 100 miliara dolara
Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly maraina tao Abidjan, renivohitr'i Côte d'Ivoire, ny fihaonamben'ireo Filoham-pirenena sy Filoham-panjakana aty Afrika mikasika ny fametrahana ny famatsiam-bola ao anatin'ny IDA20.
Hiaina fialana bala sisa
Ny olona afaka no afaka manafaka ary izay madio no afaka manadio, hoy ny fampatsiahivan’ilay solombavambahoaka miaradia amin’ny fitondrana ankehitriny izay omaly.
« Gym Bacc » Tovolahy 20 taona namoy ny ainy
Tovolahy vao 20 taona monja antsoina hoe Razafimamonjy Kanto, mpianatra kilasy famaranana ao amin'ny Lycée Razafindraibe Victorien (LVR)
Famonoana alika faobe 104 no indray naripaka tany Madirovalo
Nanatanteraka hetsika famonoana alika mpirenireny ny mponina tao Madirovalo ny alarobia 14 jolay lasa teo, niaraka tamin'ireo Veterinera tao an-toerana. Famonoana faobe io,
Rivo Rakotovao “Voafatotr’iza ny Filoha no tsy afaka manapa-kevitra?”
Rehefa misy ny tsy fahombiazana dia efa fomba fanao ny manova governemanta, hoy I Rivo Rakotovao Filohan’ny Antenimierandoholona teo aloha sady mpandrindra Nasionalin’ny Antoko HVM.
Depiote Naivo Raholdina Nizara titra faobe miisa 400
Tao anaty fety manetriketrika no nanatanterahana ny fisantarana ny fizarana titra faobe eto Madagasikara izay natomboka tao amin'ny boriborintany fahadimy nahalany ny solombavambahoaka,
Mpampianatra mpikaroka manerana ny nosy Miisa 2584 monja raha ny fanisana farany
Tsy ampy be dia be ny isan’ny mpampianatra mpikaroka satria raha atao ny salan’isa dia mpianatra 57 isa no tazomin’ny mpampianatra iray. 167 izany ho an’ny oniversiten’I Toamasina.